Safarka Amiirka Qadar muxuu ka badali karaa Khilaafka dalalka Khaliijka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Safarka Amiirka Qadar muxuu ka badali karaa Khilaafka dalalka Khaliijka
Safarka Amiirka Qadar muxuu ka badali karaa Khilaafka dalalka Khaliijka
Amiirka Qadar ayaa dhowaan Magaalada Dooxa kaga ambabaxay socdaalkiisa ugu horeeyay ee dibadda ah, isagoo safarkiisii ugu horeeyay ku tagay dalka ay saaxibada yihiin ee Turkiga.
Waxaa magaalada Cankara ee xarunta dalka Turkiga uu kula kulmay madaxwaynaha dalkaasi Raccep Tayyip Erdogan, isagoo markii dambane u dhoofay dalalka Jarmalka iyo Faransiiska.
Turkiga ayaa ah dowladda saaxibka la ah dalka Qadar oo haatan ay saran yihiin cuno-qabatayn Dhul, Cir iyo Badba leh, taasi oo ay kusoo rogeen dalalka ay bah-wadaata yihiin ee carabta kuwaasi oo uu hogaamiyo Sacuudiga
Amiirka ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo shirka guud ee Qaramada Midoobay kaasi oo ka dhici doona dalka Maraykanka.
Magaalada Berlin waxaa uu shalay kula kulmay Ra’’isul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxwaynaha dalka Faransiiska, waxaana uu kala hadlay qalalaasaha iyo dhibaatada uu dalkiisa haatan wajahayo, inkastoo Qadar ay tahay dowlad aan saamayn wayn ku yeelan qalalaasahaasi ayadoo adeegsanaysa dhaqaalaheeda, waana dal loo arko inuu yahay kan ugu qanisan caalamka.
Waxaa uu ugu baaqay hogaamiyaasha midowga Yurub inay kaalin mug leh ka qaataan xalinta muskiladda Khaliijka, isagoo ugu yeeray inay taageeraan dhex-dhexaadinta uu wado amiirka dalka Kuwayt.
Hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa kulanka ay la qaateen Amiirka ka dib waxaa ay ugu baaqeen isba-haysiga Sacuudiga inay cuno-qabataynta ka qaadaan dalka Qadar.
Amiirka ayaa la sheegay in isagoo adeegsanaya miisaankiisa iyo Istiraatiijiyadda dalkiisa uu u leeyahay caalamka uu safarkiisa u adeegsado in uu soo deg-dego xal u helidda dhibaatada ka taagan Khaliijka.
Hadaba saamaynta Amiirka iyo Muhiimadda Caalamka uu u leeyahay dalka Qadar iyo safarkiisa uu Dunida ku marayo ma laga yaabaa inay soo dadajiso in xal dhow loo helo dhibaatada siyaasadeed ee ka taagan dalalka isku qoyska ah ee Khaliijka.
Dadka dhiraandhiriya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa waxaa ay qaarkood sheegayaan inaan la isku hubin waxa safarka Amiirka Qadar uu ka badeli karo khilaafka Carabta.
Waxaa ay sheegayaan in hogaamiyaha Qadar muddo Saddex bilood ah magaalada Dooxa uu kaalin wayn kaga ciyaarayay in xal loo helo mushkiladaasi, isagoo ahaa hogaamiye is-xakamaynayay marka loo eego hadalada ilaa iyo hadda uu ka yiri khilaafkaasi.
Waxaa muuqata inuusan samaynin wax jileec siyaasadeed ah oo ku aadan arimaha la isku haysto oo ah in dalka yar ee Gaas-ka qaniga ku ah uu taageero waxa ay Reer-galbeedka ay ugu yeeraan argagaxisada, eedayntaasi oo amiirka iyo dowladdiisuba ay beeniyeen.
Qadar iyo Amiirkeeda waxaa ay falanqeeyayaasha siyaasada Carabta sheegayaan inay caddeeyeen inaanu ahayn dowlad yar oo ku jirta jeebka Sacuudiga, ayadoo diiday dhammaan 13-kii qodob oo ay soo jeediyeen dalalka Carabta.
Qodobadaasi waxaa ka mid ahaa in ay Qadar joojiso taageerada Ikhwaanul Muslimiinta, inay xirto Telfiishinka ALJAZEERA, inay xiriirka u jerto Iiraan, inay albaabada isugu dhufato xarunta militari ee Turkiga uu ku leeyahay dalka Qadar.
Falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in dalalka isbahaysiga Carabta ay ayagu sameeyeen wax xoogaa Tanaasul u muuqda taasi oo haba yeraatee laga waayay xukuumadda Dooxa.
Dagaalkan ayaa ugu dambayn waxaa la qiyaasayaa inuu ku guulaysan doonto xukuumadda Dooxa.
Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka, ayaa maanta ah oo sabti war uu soo saaray ku sheegay in Madaxweyne Donal Trump, maalinta Talaadada ah uu la kulmayo Amiirka dalka Qadar, Sheekh Tamiim Bin Xamda Al Thaani.
Labadani hogaamiye oo ah kuwo marka loo eego ku kala aragti duwan qalalaasaha diblumaasiyadeed ee ka taagan dalalka Khaliijka ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan Magaalada New York oo maalmaha soo aadani qorshu uu yahay inuu ka furmo shirka guud ee golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay kaasi oo ay ka qayb-gali doonaan hogaamiyaasha dhammaan dalalka qaybta ka ah Q.M.
ilaa in inta uu socdo kulankooda in ay isla soo hadal qaadaan doorka uu Mareykanka ka qaadan karo xalinta arrimaha Khaliijka.
Doland Trump, ayaa bilowgii muskiladda Khaliijka waxaa uu u muuqday mid taageerayay dhibaataynta dalka Qadar, isagoo qoraalo gaagaaban uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko inuu miro-dhalay socdaalkiisii Magaalada Rayadh.
Maraykanka ayaa Qadar ku leh Xarunta military ee ugu wayn uu ku leeyahay Bariga Dhexe taasi oo ay ka howl-galaan in ka badan 12,00 oo ciidamo Ameerikaan ah.
Previous articleRa’iisul wasaare Khayre oo la kulmay Guddiga Taakuleynta & Wacyi-gelinta Ciidamada [Sawiro]
Next articleMadaxwaynaha oo la kulmay qorayaal ka qayb galay bandhigga Buugaagta Muqdisho[Sawiro]